ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : ဒေါ်စု ပြောပြီ !! ဘာတဲ့?
ဒေါ်စု ပြောပြီ !! ဘာတဲ့?
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ နတ်မောက်မြို့ရှိ ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ဘောလုံးကွင်းတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ယခုပြောကြားနေသော မိန့်ခွန်းမှ အချို့ကို ကောက်နုတ်ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
"ကျွန်မတို့ အာဏရမှ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံကို လျင်လျင်မြန်မြန်ထူထောင်နိုင်မယ်။ ဒါကြောင့် အာဏာလိုချင်သလားဆို လိုချင်တယ်လို့ ပြောမယ်။ အာဏာလိုချင်တယ် ဆိုတာ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတစ်ခုကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် တည်ဆောက်ချင်လို့ပဲ "